Gcwalisa uLuhlu lweeMpazamo ngenxa yoRhwaphilizo kuVimba weDatha
Ikhaya iimveliso DataNumen Access Repair Gcwalisa uluhlu lweempazamo
Gcwalisa uLuhlu lweeMpazamo ngenxa yokuFikelela kweDathabheyisi yoFikelelo kuVimba
Xa usebenzisa iMicrosoft Access ukuvula idathabheyisi yokuFikelela eyonakeleyo, uya kubona imiyalezo yeemposiso eyahlukeneyo, enokudida yona. Ke ngoko, apha siza kuzama ukudwelisa zonke iimpazamo ezinokubakho, zilungiswe ngokwamaxesha aqhubekayo. Kwimpazamo nganye, siza kuchaza uphawu lwayo, sichaze esona sizathu sichanekileyo kwaye sinike isampulu yefayile kunye nefayile emiselwe sisixhobo sokufumana kwakhona. DataNumen Access Repair, ukuze ube nokuziqonda ngcono. Apha ngezantsi siza kusebenzisa 'igama lefayile.mdb' ukubonisa igama lakho lefayile yokufikelela kwi-MDB.
Ifomathi yedatha engaziwayo 'igama lefayile.mdb' (Impazamo 3343)
Isiseko sedatha 'filename.mdb' kufuneka silungiswe okanye ayisiyo fayile yedatha. (Impazamo 2239) Wena okanye omnye umsebenzisi unokuyeka ngokungalindelekanga iMicrosoft Office Access ngelixa i-Microsoft Office Access database ivulekile. Ngaba uyafuna ukufikelela kuMicrosoft Office ukuzama ukulungisa isiseko sedatha?
Injini yedatha yeMicrosoft Jet ayifumananga nto 'i-xxxx'. Qinisekisa ukuba into ikhona kwaye upela igama layo kunye negama lendlela ngokuchanekileyo. (Impazamo 3011)
Ayikwazi ukuvula 'igama lefayile'. Isenokungabi sisiseko sedatha esamkelwa sisicelo sakho, okanye ifayile inokonakala. (Impazamo 3049)
Awunazo iimvume ezifanelekileyo zokusebenzisa 'igama lefayile.mdb'. Yiba nomphathi wenkqubo yakho okanye umntu odale into akusekele iimvume ezifanelekileyo. (Impazamo 3033)
Uhlobo lwedatha engasebenziyo (Imposiso 3259)
Impazamo engalindelekanga 35012
Utshintsho olucelile kwitafile aluphumelelanga kuba luya kwenza amaxabiso aphindwe kabini kwisalathiso, isitshixo sokuqala, okanye ubudlelwane. (Impazamo 3022)
Ukufikelela kukaMicrosoft kufumanise ukuba le datha ikwisimo esingahambelaniyo, kwaye uya kuzama ukubuyisa isiseko sedatha. Ngethuba lale nkqubo, ikopi yogcino lwedatha iya kwenziwa kwaye zonke izinto ezifunyenweyo ziya kubekwa kwindawo yogcino lwedatha. Ukufikelela kuya kuvula isiseko sedatha esitsha. Amagama ezinto ezingabuyiswanga ngempumelelo aya kufakwa kwitafile "yeempazamo zokubuyisela". (Impazamo 9505)
Ukufikelela kukaMicrosoft cela iphasiwedi xa uvula isiseko sedatha esikhohlakeleyo.
Isiseko sedatha asinakuvulwa ngenxa yokuba iprojekthi yeVBA equlethwe kuyo ayinakufundwa. Isiseko sedatha sinokuvulwa kuphela ukuba iprojekthi yeVBA icinyiwe kuqala. Ukucima iprojekthi yeVBA kususa yonke ikhowudi kwiimodyuli, iifom kunye neengxelo. Kuya kufuneka ugcine isiseko sedatha yakho ngaphambi kokuzama ukuvula isiseko sedatha kwaye ucime iprojekthi ye-VBA. (Impazamo 29081)
'Id' ayisosalathiso kule thebhile. okanye i-'AOIndex 'ayisiyo isalathiso kule thebhile. (Impazamo 3800)
Ayisiyo bookmark isebenzayo. (Impazamo 3159)
Impazamo egciniweyo (- ####); akukho myalezo wale mpazamo. (Impazamo 2626/3000)
Le fayile inokungakhuseleki ukuba inekhowudi eyenzelwe ukonakalisa ikhompyuter yakho.
Kwireferensi yakho, siqokelela uluhlu olupheleleyo lweempazamo zokufikelela kwiinguqulelo ezahlukeneyo zokuFikelela:
Gcwalisa uluhlu lokufikelela kwiimpazamo zika-2003
Gcwalisa uluhlu lokufikelela kwiimpazamo zika-2007
Gcwalisa uluhlu lokufikelela kwiimpazamo zika-2010
Gcwalisa uluhlu lokufikelela kwiimpazamo zika-2013
Gcwalisa uluhlu lokufikelela kwiimpazamo zika-2016